Phenylpriracetam (Carphedon) အမှုန့် (77472-70-9) ≥98% | ထုတ်လုပ်သူ
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်
SKU: 77472-70-9. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Phenylpriracetam ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Carphedon) အမှုန့် (77472-70-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 129.5-130.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်
Phenylpiracetam အမှုန့်, Phenotropil အမှုန့်, Carphedon အမှုန့်
100-200 ထံမှ phenylpiracetam powderranges ၏ပုံမှန်ထိုးတနေ့သုံးကြိမ်အထိယူထိုးနှုန်း MG ။ ၎င်း၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုမှကသောက်သုံးသောအကွာအဝေး၏အောက်ပိုင်းအဆုံးမှာစတင်ထို့နောက်လိုအပ်ပါကတိုးမြှင့်ဖို့အကြံပြုသည်။
phenylpiracetam အမှုန့်ဖို့သည်းခံစိတ်အတော်လေးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သတင်းပို့သည်။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ပေမယ့်အစားအသငျသညျအခါအားလျော်စွာအရှိဆုံးသို့မဟုတ်သံသရာကမလိုအပ်သည့်အခါသင့်ရဲ့အစွမ်းအတိုးပွားရန် tool အဖြစ်ယူရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
အများစုမှာဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကြွဆေးအချို့သောအတိုင်းအတာအထိနိူးစနှော, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းဖြစ်စေလေ့ရှိပါတယ်။ Carphedon အမှုန့်သည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, သူတို့ဝေးလျော့နည်းဖွယ်ရှိဒီဖြည့်စွက်အခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူထက်ဖြစ်ကြသည်။ Carphedon အမှုန့်သို့မဟုတ် Phenylpiracetam အမှုန့်ဖြည့်စွက်ရွှင်လန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အများဆုံးကိုအခြားစိတ်ကြွဆေးထက်လျော့နည်းအန္တရာယ်နှင့်အတူသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
Carphedon အမှုန့်နှင့် Oxiracetam အဆိုပါ racetam မိသားစုဝင်နှစ်ဦးကိုအများဆုံးလှုံ့ဆော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ရွှင်လန်းတိုးမြှင့်ဖို့လိုလျှင်နှစ်ဦးစလုံးအကြီးအ options များဖြစ်ကြ၏။
ရလဒ်များ၏အဘယျအမျိုးအစားများငါ Phenylpiracetam အမှုန့်ကနေမျှော်လင့်သင့်သလော
Phenylpiracetam အမှုန့်ဈေးကွက်အပေါ်ယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်သောအများဆုံးဖြစ်ပွား nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ racetam မိသားစုထံမှတစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကို nootropic နှင့်မူရင်း nootropic piracetam တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအစွမ်းထက်ကြိမ် 30 မှ 60 ဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည် မှလွဲ. ပိုကောင်းအာရုံကြောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပြချက်များအတွက်, phenylpiracetam အမှုန့်လျှင်မြန်စွာ nootropic အသုံးပြုသူများသည်အကြားပျံ့နှံ့ရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ, phenylpiracetam အမှုန့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကပူးတွဲတစ် phenyl အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူ piracetam ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက piracetam ၎င်း၏မိဘမော်လီကျူးကအတော်လေးဆင်တူစေသည်ပေမယ် phenyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်အောက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်:
1 ။ ပိုမိုတဲ့စွမ်းရည် - ထိုမော်လီကျူးကဦးနှောက်သွေးအတားအဆီး (BBB) ​​ပိုမိုလွယ်ကူသွားခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အာနိသင်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုများတိုး။
2 ။ သရုပ်ြပ - ထိုသို့သော Adderall အဖြစ် phenethylamine ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာအကြံအစည်ကြောင့်ပိုမိုလှုံ့ဆော်ဆိုးကျိုးများ။
အခြားအ racetams နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခုနှစ်, phenylpiracetam အမှုန့်အတော်လေးအစွမ်းထက်သည်နှင့်နှုတ်မျိုချမိလျှင်ပင်မြင့်မားသော bioavailability ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ဝက်ဘဝကိုလူသားများတွင် 3-5 နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
(Carphedon အမှုန့်) Phenylpiracetam အမှုန့်အပေါ်သတိပေး:
အဆိုပါ racetam လူတန်းစားအခြား nootropics ကဲ့သို့ပင်အနည်းငယ်အစီရင်ခံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကြံပြုထားတဲ့ဆေးညွှန်းမှာယူသည့်အခါ phenylpiracetam အမှုန့်ဖြည့်စွက်ခြင်းမှရှိပါသည်။ သငျသညျအတှေ့အကွုံခေါင်းကိုက်ပြုလျှင်ကြောင့် racetams ယူပြီးတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အကြံပြုသောသင်သည်သင်၏ choline ဖြည့်စွက် add သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်သင့်ကြောင်းဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကို, ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Phenylpiracetam အမှုန့်ဦးနှောက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အစီရင်ခံထားပါတယ်, ပိုမိုထိရောက်စွာ piracetam ထက် memory နဲ့ခြုံငုံသိမှတ်ခံစားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Phenylpiracetam အမှုန့်က၎င်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်အစွမ်းထက်သဘာဝကြောင့်မဆို nootropic stack တစ်ခုအလွန်ကြီးစွာသောထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသအားကစားသမားများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများက၎င်း၏လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောဂုဏ်သတ္တိများမှအများဆုံးကြောင့်အကြိုးရှိနိုငျသညျ။ မဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်တန်ဖိုးရှိသောဆုကြေးငွေဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုတိုးလာသည်းခံစိတ်ပေးပါသည်။
လေ့လာမှုတွေမှာတော့ phenylpiracetam အမှုန့်ကိုအောက်ပါဆိုးကျိုးများပြသခဲ့သည်။
asthenia နှင့်အတူလူနာအတွက်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-switching နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်စေပါ။
phenylpiracetam အမှုန့်၏အကျိုးကျေးဇူးများလေ့လာသင်ယူဘို့အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ပါသည်။ တစ်ခုမဟုတ်ရင်ဆုံးရှုံး CRAM session တစ်ခု, pretest အာရုံစိုက်အကူအညီများ, ဒါမှမဟုတ်ပဲယေဘုယျမှတ်ဉာဏ်လေ့လာမှု Enhancer အိပ်ဘို့၎င်း၏လှုံ့ဆော်သဘာဝကြီးလှ၏။ မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြည့်စုံ retention ကိုတိုးမြှင့်မှုအတွက်ခွင့်ပြုပါ။ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ခံစားချက်တိုးမြှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာယေဘုယျပိုကောင်းလေ့လာမှုအဘို့ခွင့်ပြုပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ပိုကောင်းတဲ့ဖိအားအောက်မှာလေ့လာနေဘို့ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။
Phenylpiracetam အမှုန့်ကိုလည်းထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်သည်ကြီးလှ၏။ ဒါဟာကျလုံ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်တိုးပွားလာတစ်ခုအားကစားသမားများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုမှဒီအတိုးလာသည်းခံစိတ်လည်းအအေးရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သည်းခံစိတ်တိုးမြှင့်ပါဝင်သည်။
Phenylpiracetam အမှုန့်ကိုလည်းတခုစိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆင်တူကာစွမ်းအင်ပေးစွမ်းသည်။ ကဖိန်းဓာတ် Jitter မရှိဘဲစင်ကြယ်သောအာရုံစူးစိုက်, လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းသင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်ကူညီဖို့ရန်ဝင်းအတွင်းစံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဖိန်းဓာတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်အဘယ်သူမျှမပျက်ကျမှုမှအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမား phenylpiracetam အမှုန့်ကမ္ဘာ့ဖလား Anti-Doping ရဲ့ပိတ်ပင်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာစာရငျးတှငျနှင့်အညီ phenylpiracetam အမှုန့်ဖြည့်စွက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။
CARPHEDON အမှုန့် vs. PIRACETAM အမှုန့်
Carphedon ၏ဖွဲ့စည်းပုံ Piracetam ရန်အလွန်ဆင်တူသည်နှင့်နှုတ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြပြီးအလားတူဝက်ဘဝတွေကိုအခါနှစ်ဦးစလုံး bioavailable နီးပါး 100% ရှိပါတယ်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့် piracetam ဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်စဉ်းစား Carphedon (Phenylpiracetam) အမှုန့်ဖြစ်သနည်း
Carphedon အမှုန့်ကရလဒ်တွေကိုကြည့်ဖို့သိသိသာသာလျော့နည်း Carphedon အမှုန့်ကြာသည်ဟုအဓိပ္ပာယ် piracetam ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက် 60 ကြိမ်သလောက်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဤသည် Piracetam မြင့်မားဆေးများကိုယူပြီး Carphedon အမှုန့်ကဲ့သို့တူညီသောရလာဒ်များပူဇော်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့ပို Piracetam ယူပြီးတစ်အချို့အချက်အပြီးလျော့နည်းသွားရလဒ်များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ phenyl အုပ်စုတစ်စုကသက်ရောက်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်အာရုံသွေးနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်တိုးတက်အောင်မှာပိုပြီးထိရောက်စေသည် Carphedon အမှုန့်ကိုဖန်တီးရန် Piracetam မှဆက်ပြောသည်။
CARPHEDON အမှုန့် vs. NOOPEPT အမှုန့်
သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအကောင်းအဆိုး cons နှင့်အတူနှစ်ဦးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများကြောင့်ဒါဟာ Noopept မှ Carphedon အမှုန့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာတကယ်တစ်ဦးချင်းစီကဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပေါ်တွင်မူတည်သည်သင်တို့အားအကျိုးသက်ရောက်ပုံကို။
Noopept Carphedon ရဲ့အမှုန့် 1,000 ကြိမ်ဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, 60 ဆပိုမိုအစွမ်းထက် Piracetam ထက်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒါကရိုးရိုးကရလဒ်တွေကိုပေးစေခြင်းငှါထိုသို့လျော့နည်းကြာသည်ဟုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်သူကသင်ရှာနေသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, တကယ့်သူကဘယ်လောက်အစွမ်းထက်အရေးမထားဘူး။
Noopept နှင့် Carphedon အမှုန့်နှစ်ဦးစလုံးသည်းခံတည်ဆောက်ဘို့အလားအလာရှိသည်။ အဲဒီမှာနှစ်ခုတ္ထုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အများအပြားလေ့လာမှုများခဲ့, ဒါကြောင့် သာ. ကောင်း၏အဖြစ်ရာမှတစ်ဦးပုဂ္ဂလဒိဋ္နိဂုံးချုပ်ဆွဲရန်ခက်ခဲင်ကြပြီမဟုတ်။
CARPHEDON အမှုန့် vs. PRAMIRACETAM အမှုန့်
ဤတွင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်နှစ်ခု nootropic တ္ထုများဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းကောင်းစွာလေ့လာမှုတစ်ခု nootropic, အခြားတစ်ဦးအစွန်းရောက်အာရုံဖြည့်စွက်အဖြစ်လူသိများသည်။ နှစ်ဦးစလုံး nootropics အသုံးပြုသူများသည်အကြားလူသိများဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးဟာစျေးကြီးတဲ့ဘက်မှာရှိပါတယ်။
Carphedon အမှုန့်နှင့် Phenylpiracetam ရဲ့အမှုန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာများသိသိသာသာခြားနားသည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အစွမ်းထက်သောရလဒ်များကိုမြင်နေသတင်းပို့ပါ။ အခြားအသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာများကအကျိုးသက်ရောက်မှုဒါမှမဟုတ်ပင်ပန်းသူတို့ကိုအရွက်နှင့်၎င်းတို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မြူဆိုင်းအကြောင်း, ပိုဆိုးမျှအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။ Phenylpiracetam အမှုန့်ကိုယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပေါ်မှာငါတို့ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ထွက်စစ်ဆေးပါ။
Carphedon အမှုန့်သုံးစွဲသူများသည်ရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းအချို့သောကိစ္စများတွင်, အစားအလျင်အမြန်သည်းခံစိတ်ဆောဟန်ပါဘူး။ အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီး, ကသည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ရန်ကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာများတွင်ကွာဟမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ပေးသွင်းအတု Carphedon အမှုန့်ရောင်းချနေသည်ဟုကြောင်းအတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pramiracetam, အခြားတစ်ဖက်တွင်အသုံးပြုသူများပိုပြီးအားကိုးရလဒ်များကိုပူဇော်ပုံရသည်။ Pramiracetam Carphedon အမှုန့်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းတီထွင်ခဲ့ခြင်းနှင့် nootropics ကြားတွင်ကိုယ်နှိုက်ကသက်သေပြခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Carphedon အမှုန့်နှင့်အတူပြဿနာများကိုအချို့ကိုပေးသွင်းကိစ္စများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ပိုပြီးလူများကသတိပြုမိဖြစ်လာနှင့်ကမေးကြသည်, ပိုမိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ nootropic လက်လီရောင်းချသူများကသယ်ဆောင်ရန်စတင်နေကြသည်။
Carphedon အမှုန့်နှင့် Pramiracetam နှစ်ဦးစလုံးအားစမ်းကြည့်ပါ, သင်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိသောဒါရုံသင်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဝယ်ယူနေကြသည်သေချာပါစေ။ သငျသညျအခွားသောကျော်တဦးတည်း သာ. နှစ်သက်တက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သင်သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှစ်ခုအကြားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စက်ဘီးစီးသုံးပြီးတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုပေးစေခြင်းငှါအကောင်းတစ်ဦး stack ကိုရှာပါ။
Phenylpiracetam ကုန်ကြမ်း Powder:
Carphedon အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လို: AASraw ထံမှ Phenylpiracetam အမှုန့်ကိုဝယ်?
Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့် HNMR
Carphedon ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း: